Author: Todal JoJobar
Ammas hedduun namootaa waan jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu.
Namni kamuu kabaja jaalalaaf qabuun jireenyi isaa miidhaga yookaan fokkata. Gorsa koo kana hunda immoo ‘upload’ gootee ‘wall’ kee irratti akka mul’istu abdiin qaba. Jaalala Dhandhamadhu Comic Bookstore.
Silaaaddunyaan tun hundi jiraachuu baattee ati qoftiin jiraattee naafgahaadha. Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Afaan Oromoo website Personal Blog. Ani sirraa addaan bahuun koo hedduu na rakkise. Ati umriidhaan baay’ee daa’ima. Sirriitti jabeeffadhu – hinaaftotni ‘hack’ godhanii tokkummaa keenya diiguu danda’u waan ta’eef!
Dhalli ishee kun isheef waa hedduudha. Sections of this page.
Gammachuu guddatti kan nama geessu jaalala dhugaati. Home Fayyaa fi Jaalala Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata. Kan borii immoo Waaqayyotu beeka! Afaaniin kaninni itti himuufi jireenyi isaa walitti hin dhufu. Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Garuu umuriin ishee waan deemeef qofa, nama akka isaatti ishee jaallatu waan hin arganneef qofa, dhiira jaalallee ishee jalqabaa sammuu ishee keessaa balleessu waan yoomuu harkisuu hin dandeenyef qofa, waan heerumtee dhala godhachuu qabduuf qofa, waggaa lama booda dhiira biraatti siqxee haadha manaa taate.
Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha!
Kunis Maatiin kee adeemsa kana dhageenyaan rakkinni jabaan uumamuu danda’a sodaa jedhu waan qabnuufidha! Kan ishee kanaas akkasuma.
Sammuuko Nanyaatee Boqonnaa Nadhowwa Ummannii Koo an kanin jedhu ani nama jaalladhee beeka, warran duukaa jaalala dhamdhamaa tureyyuu baay’eesaanii kaniti beektu ofiinan dhiisee gale. Qoraasuma Jaalalaa Community Organization.
Ani jiruun tiyya simalee hin mi’ooytu. Guca maalummaa kootii See More. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? See more of Galmee Jaalala Dhugaa” on Facebook. Umuriin ishees akkasuma duratti butate. Galmee Jaalala Dhugaa” Song. Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera.
Jaalale koo duraan dagachu dadhabe 2. Erga dubbiftan booda ‘like’, ‘share’ ‘comment’ godhuu hin dagatinaa. Maatin koo baayye nati dheekamu dhoorku 7. Waan haaraa, jireenya haaraa, jaalala haaraa eegaluuf dirqamte; jaallattee miti qofummaa isheef furmaata argachuuf miti.
Uaalala gaaffii jaalalaa kana siif dhiheesses bara waktii gannaa sana baayyee sodaatte!